Yini ongayibona eFlorence | Izindaba Zokuhamba
Florencia Inhlokodolobha yeTuscany enhle yase-Italy, idolobha lasendulo, elihle, elihle kakhulu eligcwele amasiko nomlando. Konke lapha kuyathakazelisa yingakho minyaka yonke izigidi zabavakashi ziyivakashela. Akusizi ngalutho ukuthi i-UNESCO isimemezele isikhungo sayo esingumlando Amagugu Omhlaba.
Noma kunjalo, kunezivakashi eziningi ezihlala lapha izinsuku ezimbili noma ezintathu bese zihamba. Akuyona le nto engiyelulekayo, ngikholwa ukuthi okungenani izinsuku ezine ziyadingeka ukuvakashela okufanele kuvakashelwe futhi uphumule, ugibele ibhayisikili noma umane uhambe ngezinyawo. Yini ongayibona eFlorence? Hlela.
1 UFlorence, idolobha lasendulo
2 IFlorence Tourism
UFlorence, idolobha lasendulo
Ezikhathini zasendulo uFlorence kwakuyinhliziyo yezohwebo nezezimali e-ItaliKukhona nelinye lamadolobha abaluleke kakhulu ezwenikazi. Yi- ekuzalweni kwe-Renaissance, isingathe abanamandla Umndeni wakwaMedici nazo zonke izinhlangano ezinkulu zepolitiki ezungeze lapha.
Isikhungo salo esingumlando samenyezelwa njengeSiza Samagugu Omhlaba ekuqaleni kwawo-80, kepha asinampande yeNkathi Ephakathi kepha ngezikhathi zeRoma lasendulo nangaphambilini, ngesikhathi sama-Etruria.
Ukukhuluma ngokwendawo isesigodini esakhiwe ngamagquma amaningana futhi umthambo waso omkhulu womfula udumile Umfula i-Arno esiteshini sakubo kunamabhuloho amaningana. Ihlobo lalo liyashisa, ekwindla kwalo kunemvula eningi futhi ubusika balo buhlala bunokuwa kweqhwa okuhehayo.
Yebo, mayelana nezokuvakasha kuningi okufanele kubonwe futhi kwenziwe, ikakhulukazi kubathandi bomlando nezobuciko. Bangu iminyuziyamu, zemibukiso, amasonto, tikwele. Ukuqala ngeminyuziyamu, owokuqala ohlwini uhlu lwe- Uffizi Gallery, omunye weminyuziyamu yobuciko ehamba phambili emhlabeni.
I-Uffizi Gallery iyinhlobo ye-labyrinth egcwele amakamelo amahle afihlwe ngaphakathi kwesakhiwo esimise okweleta U. Isitayela sokwakha yile Ukuvuselelwa kabusha futhi yayalwa ukuthi yakhiwe nguCosimo de 'Medici kuGiorgio Vasari, khona lapho eduze kwePalazzo Vecchio, isihlalo samandla kwezepolitiki. Lokho wukuthi, ayizalwanga njengemyuziyamu kepha ngokuhamba kwesikhathi yaba yileyo evakashelwa yizinkulungwane nezinkulungwane zabantu nsuku zonke.
Ngezikhathi zakhe kwakungangena umndeni wasebukhosini kuphela ngoba lapha iqoqo labo lobuciko elibalulekile laboniswa bona nabangane babo noma izivakashi: izinhlamvu zemali zasendulo, imibhalo yesandla, izithombe zaseRoma, ubucwebe, imidwebo eyenziwe nguGiotto noCimabue, Masaccio, Paolo Uccello noma uPietro della Francesa kanye nokuqoqwa kwakhe kwezithombe zeducal. Ukuzalwa kukaVenus ulapha futhi, kufana nokuthi kukhulu Izinsolo Zentwasahlobo ...
UMichelangelo, uRaphael, da Vinci, Bangabanye babaculi abakhulu ozozibona lapha. Ekugcineni, imininingwane: Umhubhe weVasari ukuxhumanisa i-Uffizi nePalazzo Vecchio nePitti Palace engaphesheya komfula. Liyikhilomitha ubude futhi lisuselwa engxenyeni yesibili yekhulu le-XNUMX.
Ukungena kugalari ye-Uffizi kubiza ama-euro ayi-12 phakathi kukaNovemba noFebhuwari kanye nama-euro angama-20 phakathi kukaMashi no-Okthoba. Kungenwa mahhala njalo ngeSonto lokuqala enyangeni. Kuvulwa kusukela ngo-8: 15 ekuseni kuye ku-6: 50 ntambama. Kuvaliwe ngoMsombuluko.
Omunye umnyuziyamu onconyiwe yi- Igalari Yezemfundo, siphi isithombe esidumile se- UDavid nguMichelangelo. Ngaphezu kwalokho, into yokuqala oyibonayo ibizwa ngeHholo laseColossi, namuhla elinesithombe esikhulu se- Ukuthunjwa Kwabesifazane BaseSabine nguGiambologna. Kukhona namakamelo anemidwebo eminingi nokubonisa okuhle kwezinsimbi zomculo nobuciko benkolo yobuGoth. Kepha ngokusobala, inkanyezi nguDavid. Kulula ukuhamba kungekudala ngaphambi kokuvala ngoba kuthulula abantu bese usala wedwa.
Ukungena kubiza ama-euro ayi-8 futhi ibhokisi lehhovisi livalwa ngo-6: 20 ntambama. Umnyuziyamu uvulwa kusukela ngo-8: 15 ekuseni kuye ku-6: 50 ntambama, ngoLwesibili kuze kube yiSonto. Kuvaliwe ngoMsombuluko. Imnyuziyamu yesithathu yisonto, i- ISonto LaseSanta Maria Novella ngesici sayo semabula esimibalabala. I-Gothic ngesitayela futhi uma ingadonsi ukunaka kwakho ngaphandle kwe- Ngaphakathi yinhle kakhulu ngoba inemisebenzi kaGiotto, Masaccio noma iGhirlandaio.
Ukungena kungama-euro ama-5 futhi kuvulwa nsuku zonke. Yebo, ungarekhoda noma uthathe izithombe, ngokwemvelo ngaphandle kwe-flash. Ngaphambi kokuthi sibize igama elithi Palazzo Pitti. Inkulu futhi uma umbono wakho ukuyihambela ngosuku olulodwa kufanele wenze ingaphakathi ekuseni nezingadi zayo ntambama. Kokubili kuwufanele! ngaphakathi kukhona Palatina Igalari, iminyaka engamakhulu amane yobukhazikhazi kanye nengcebo ngemisebenzi yobuciko kaRafael noRubens. Ubuhle bama-fresco, imipheme nezindlu zokulala ezizimele (amafulethi asebukhosini kanye namafulethi asebukhosini, ngokwesibonelo), asetshenziswa ngumndeni.
Ngaphandle kukhona Izingadi zaseBoboli, inkulu futhi yinhle. Ngokushesha nje lapho ungena kuzo, zimiswe njengendawo yemidlalo yezemidlalo, zinezithombe nemigwaqo, futhi lapho uhamba ungaya endaweni enezihlahla zama-rose ezifihla enye iminyuziyamu encane noma uqhubeke nokuhamba ufinyelele kwezinye izingadi ezenziwe ngamasimu lapho ungakhona bheka i-Arno nedolobha. Ukugibela okuhle kakhulu.
Mina ngokwami ​​ngincoma ukuthi Palazzo Davanzati. Kushibhile futhi kuncane, kulula, kepha kuyathandeka ngoba kukunikeza umbono ngempilo ejwayelekile yomndeni ocebile eFlroencia. Akusona isigodlo sasebukhosini, ayikho imisebenzi yobuciko, kepha uyabona ukuthi impilo ecebile yayinjani edolobheni eNkathini Ephakathi: izindlu zokulala, izitebhisi, amakhishi, amagumbi okuhlala ngisho nezindlu zokugezela. Elinye iparele yi- Dante Museum ezinikele empilweni yombhali nemisebenzi yakhe (iVía Margherita, 1) noma enhle IGalileo Museum.
Eminye iminyuziyamu ongayivakashela yilezi IBargello Museum, cishe bonke abazinikele ebaziwe, AmaMedici Chapel okuyingxenye yeSonto LaseSan Lorenzo, anamathuna athile kaMedici futhi anesiginesha kaMichelangelo. Ukungena kubiza ama-euro angama-8 futhi kuvulwa kusuka ngo-8: 15 ekuseni kuye ku-5 ntambama. Kukhona futhi i- Imnyuziyamu ye-Opera del Duomo ngokuboniswa kwamathuluzi asetshenziswa nguBrunelleschi ekwakhiweni kwedome, isibonelo.
Futhi ngokusobala, awukwazi ukuyeka ukwazi i- Indawo yokubhabhadisela kanye neCathhedral. Ukukhuphukela kudome lwayo kuyigugu, kwenze! Umgwaqo uqobo, uncane futhi ubanzi, futhi ukubukwa okuhle kungumvuzo omuhle kakhulu. Futhi uma uqasha ibhayisikili noma uhamba ngebhasi ungafika engxenyeni engenhla yedolobha futhi wazi abancane nabanobungane Isonto le ISan Minniato al Monte. Imibono mihle futhi inamathuna athakazelisayo.
Ekugcineni, idolobha laseFlorence linekhadi lezivakashi, i- Ikhadi le-Firenze kubiza malini I-85 euro. Njengenjwayelo, ngalolu hlobo lwekhadi, kufanele wenze izibalo ukubona ukuthi kufanelekile noma cha. Ngahlala izinsuku eziyisihlanu eFlorence futhi angibonanga yonke into ngokuphelele. Lokho wukuthi, ukuyithenga noma cha kuncike kakhulu kuzintshisekelo zakho nesikhathi ohlala kuso edolobheni. Ikhadi Isebenza amahora angama-72 futhi ivumela ukuvakasha okukodwa emnyuziyamu ngamunye.
Namuhla kukhona i- I-Firenze Card +, Ama-euro angama-5 ngaphezulu, afaka phakathi i- ukusetshenziswa okungenamkhawulo kethilamu namabhasi, letha umhlahlandlela wasemnyuziyamu nesikhwama. Iqiniso ukuthi, uma uya edolobheni ngesizini ephansi, uhlala enkabeni futhi unentshisekelo kuphela kumamnyuziyamu abaluleke kakhulu, akufanele uwuthenge. Manje, uma uhlala izinsuku ezingaphezu kwezintathu, uma ufuna ukuvakasha kaningi noma uma uya ehlobo lapho kunabantu abaningi, kulula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Florencia » Yini ongayibona eFlorence
Yini ongayibona emazweni aseBalkan